Alexis Texas ပြည်နယ်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ဗီဒီယိုများ / ဓါတ်ပုံများ - အကျီချွတ်ပေးပါ
နေအိမ် Sexy Girls Alexis Texas ပြည်နယ်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ဗီဒီယိုများ / ဓါတ်ပုံများ
Alexis Texas ပြည်နယ် ပနားမားအတွက်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာမွေးဖွားခဲ့, ဒါပေမယ့် Castroville အတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင်ကြီးပြင်းလာ. သူမသည်ဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်သည်, Puerto Rico နှင့်နော်ဝေနွယ်ဖွား. Alexis Texas ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်အတွက်ဂျက်ဗင်းနစ်နှင့်အတူသူမ၏ပထမဦးဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ရိုက်ကူးနေပါတယ်. ထိုအခါသူမမှပြောင်းရွေ့ Los Angeles မြို့. F ကိုebruary 2008 ခဲ့ အဖွင့် Alexis Texas ပြည်နယ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူမင်းသမီးအဖြစ်. တွင် 2009 သူမကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့. သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလအတွင်းကမ်ဘာဦးကမဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးပေါ်ခဲ့သည် 2009 နှင့် Hustler မဂ္ဂဇင်း၏ 35 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အပေါ်ဇွန်လတွင် 2009. တွင် 2010, သူမထိပ်တစ်ဦးအဖြစ်အမည်ရှိ၏ 12 Maxim အားဖြင့်အပူဆုံး porn ကြယ်များ. တွင် 2011 သူမတစ်ဦးခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူမ၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း. ဒါဟာထိတ်လန့်ဟာသရုပ်ရှင်ခဲ့သည်. တွင် 2013, တစ်ဦးက. တက္ကဆက်ပြည်နယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် 16 ဒေဗောရ Anderson ကလို့ခေါ်တဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပုံဖော်သူကိုမင်းသမီး.
Alexis Texas ပြည်နယ်အတွင်းပိုင်း Twistys join!
1 ၏ 24
နောက်ထပ်ကြည့်ရန် Twistys အတွင်းပိုင်း Alexis Texas ပြည်နယ်၏
Alexis Texas ပြည်နယ်
ယခင်ဆောင်းပါးအခန်းပေါင်း “hot Girlfriend” Desktop ပေါ်မှာချွတ်ပြီး
နောက်ဆောင်းပါးLinet တစ်ဦးက Virtua Girl – “တုန်လှုပ်လှုပ်လှုပ်”